फागुन १९, काठमाडौं । काठमाडौं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपिए)ले पीपीई तथा प्रजनन स्वास्थ्य किट्स स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेललाई यूएनएफपिएले ६ हजार ४८ सेट पीपीई, ५० हजार थान सर्जिकल मास्क र २७ सेट अन्तरनिकाय प्रजनन स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।
उक्त सहयोगले आवश्यक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी सेवा सुनिश्चित गर्दै कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासलाई सघाउ पुग्ने यूएनएफपिएको विश्वास छ । प्रजनन स्वास्थ्य किट्समा समावेश अत्यावश्यक औषधि, औजार तथा अन्य सामग्रीले सुरक्षित सुत्केरी गराउन, जटिल प्रकृतिका प्रसूति तथा यौन हिंसा व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई मद्दत पुग्ने यूएनएफपिएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चीन सरकारको सहयोगमा यूएनएफपिएले करीब रू. तीन करोड मूल्य बराबरको पीपीई, आइएआरएच किट्स तथा अन्य सामग्री खरीद गरेको हो । यसअघि पनि नेपाल, चीन र यूएनएफपिए बीचको दक्षिण–दक्षिण साझेदारी अन्तर्गत १ हजार २०० सेट पीपीई र ३ हजार ६०० थान स्यानिटाइजर मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिइएको छ ।